Malunga nathi - Anshan Topticom Tele-unxibelelwano Co., Ltd.
Elona shishini lilungileyo liqala ngeyona shishini lilungileyo. Ukuba ujonge iqabane elifanelekileyo le-transceiver ebonakalayo, ukukhangela kwakho kuphelile.
Eyasungulwa ngo-2014, iTopticom imele Unxibelelwano oluPhezulu lweOptic. Emva kweminyaka engaphezu kwe-5 yokukhula ngokukhawuleza, siye sanceda ukwakha inethiwekhi ekhawulezayo nekhuselekileyo kwihlabathi liphela ngokubonelela ngomgangatho ophezulu kunye ne-transceiver ethembekileyo.
Sinikezela nge-transceiver ehambelana ne-OEM, efana ne-100G QSFP28 / CFPx, 25G SFP28, 10G SFP +, GPON ONU, OLT ect. Sijolise kwaye silandele uphuhliso lobuchwephesha ukuze sikwazi ukukunika ezona mveliso zihlaziyiweyo ukukunceda ukukhawulezisa isabelo sakho sentengiso kunye neemveliso zesicwangciso.
Iimveliso eziphezulu zeTopticom kunye nenkonzo ebalaseleyo inceda ukuphumelela ithuba lokusebenza neenkampani ezininzi ezidumileyo zehlabathi.
Zonke iimveliso zeTopticom zenziwe ngokwemfuno ye-ISO9001: 2000, UL, TUV, CE, FDA kunye neRoHS ukugcina 1st inqanaba leklasi.
Yintoni esenza sahluke?
Kungaba nzima ukuma kwindawo yentengiso egcwele ababoneleli abaphantse bajongeka ngokufanayo. Kodwa kukho izinto ezithile ezizodwa kwiTopticom ezahlula ngokwenyani kwabanye abathengisi be-transceiver.
1.Gxila kwiNkonzo yaBathengi abaPhezulu
Kwi-Topticom, bonke abantu abanxulumana nabo baqeqeshwe ngokuchanekileyo kwiindlela ezilungileyo zokuhambisa iinkonzo ezikumgangatho wehlabathi zabathengi. Sijonge ukudala amava amahle kuwe. Ukusuka kwisindululo sakho sokuqala ngokunikezelwa kwemveliso okanye inkonzo yakho yokugqibela, uya kuthathwa njengoKumkani.
2. Yomeleza kwaye yenze nzulu ubudlelwane kunye nabaThengi
I-Topticom i-transceivers ebonakalayo yenziwa ngokwemigangatho ephezulu yezemveliso kunye ne-100% yokusebenzisana kuwo onke amaqonga e-OEM. Iimveliso ezinokuthenjwa ziya kukunika ukuzithemba xa usebenza nabathengi bakho kwaye zikuncede uqinise kwaye uqinise ubudlelwane kunye nabo.
3. Inkxaso engenamkhawulo
I-Topticom iya kutyala ixesha, i-R & D kunye nezixhobo zokuxhasa yonke into oyifunayo, nangaphambi kokuba siqale ukusebenzisana ngokusesikweni.
4. Nyaniseka ngeeMveliso neeNkonzo zethu
Kuya kufuneka ubambe abanye abathengisi bexoka kuwe kwaye kubangele ingxaki enkulu kuwe. Kwi-Topticom, oku ngekhe kwenzeke. Ukunyaniseka akungomgaqo-nkqubo wethu olungileyo, kodwa owona mgaqo-nkqubo wethu uphambili, sihlala sikukwazisa ngemeko yethu malunga neemveliso kunye nenkonzo yethu.